Ama-stromatolites: ayini, izici nokubaluleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 04/08/2021 09:49 | I-Geology
Emhlabeni wethu kunezinhlobonhlobo zezakhiwo nokwakheka okungasimangaza kancane. Enye yazo ama-stromatolites. Yizakhiwo ezinamadwala alaminetiwe noma ahlukaniswe ngokwakhiwa okwakhiwa amasele kanye / noma amaminerali afakwa ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yokuba khona kwemiphakathi ye-algae eluhlaza naluhlaza okwesibhakabhaka. Lawa ma-stromatolites atholakala emanzini ahlanzekile nasawoti nakuma-evaporite deposits.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yiziphi izici, zitholakala kuphi nokuthi kubaluleke ngani ama-stromatolites.
1 Yini ama-stromatolites
3 Ukubaluleka kwama-stromatolites
4 Izindawo emhlabeni lapho singazithola khona
Ama-stromatolites ayizakhiwo ukwakheka kwamadwala ahlukanisiwe noma ahlukanisiwe akhiwe ngenhlabathi kanye / noma amaminerali afakwe yimiphakathi ye-algae eluhlaza okwesibhakabhaka futhi zingatholakala emizimbeni yamanzi ahlanzekile noma anosawoti kanye nezidumbu ezihwamukayo ezindaweni ezahlukahlukene emhlabeni. I-algae eluhlaza okwesibhakabhaka, eyaziwa kangcono namuhla njenge-cyanobacteria, imele iqembu lama-prokaryote asemanzini - angaphansi kombuso wamagciwane - angathola amandla elangeni, okungukuthi, angafeza i-photosynthesis.
I-cyanobacteria ingelinye lamaqembu abaluleke kakhulu futhi agcwele izinto eziphilayo ze-prokaryotic, njenganoma yiluphi uhlobo lwebhaktheriya, ayizinto ezincane kakhulu, ezineseli elilodwa, yize zivame ukukhula zibe amakoloni amakhulu ngokwanele ukuthi angabonakala ngamehlo. Lezi zinambuzane ezincane ze-photosynthetic zingaba yizinto zokuqala eziphilayo emhlabeni, ngoba izinsalela ezindala kakhulu ezitholakele zaziqala emuva ngaphezulu kweminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane ezintathu futhi ama-cyanobacteria atholakala kuma-stromatolites.
AmaStromatolites ayizakhiwo ezakhiwe yimisebenzi yemetabolic yemiphakathi yamagciwane, ephethwe yi-cyanobacteria, enganciphisa futhi ifake inani elikhulu leziduli namaminerali, ikakhulukazi i-limestone. Lezi zakhiwo zamadwala zithathwa njengezinto ezindala kunazo zonke emhlabeni wethu, kanti iShark Bay eseNtshonalanga Australia iyikhaya lezinhlobo ezindala kakhulu.
Ukubaluleka kwama-stromatolites kulele ekwakhiweni kwawo kwamagciwane, ngoba i-cyanobacteria equkethe akhiqiza inani elikhulu lomoya-mpilo elidingeka ezilwaneni nakwezinye izinto eziphilayo.
Ake sibone ukuthi yiziphi izici eziyinhloko ama-stromatolites anazo angavelela kuzo:
Ziyizakhiwo ezinamadwala ezakhiwe ngama-microorganisms, ikakhulukazi i-cyanobacteria, ibizwa nangokuthi izakhiwo ze-organic sedimentary ngoba zitholakala emisebenzini ye-metabolic yama-microorganisms aziqamba.
Bangabonisa ezinye izinto eziphilayo, njenge-algae eneseli elilodwa, isikhunta, izinambuzane, ama-crustaceans, njll., Kuye ngokuthi zitholakala kuphi.
Ukwakheka kwawo okunamadwala kwakhiwa ngenhlanganisela yelimestone ne-dolomite (bacebile nge-calcium carbonate).
Zakha ngokuya kwelanga njengezitshalo, ngakho-ke "zikhula" zibheka futhi zihlelwe ngamashidi noma izingqimba, ungqimba ngalunye.
Isendlalelo sangaphandle sincane kunazo zonke futhi eside kunazo zonke yisisekelo.
Zikhula noma zihlala kancane, ngakho-ke cishe ngaso sonke isikhathi zinesakhiwo esinamakhulu noma izinkulungwane zeminyaka ubudala.
Bahlala emanzini angajulile noma angajulile, bakhula emhlabathini, futhi bazwela kakhulu ekushintsheni kwesimo sezulu, ekushintsheni kolwandle nasekungcoleni.
Zingafinyelela ukuphakama okungaba ngamasentimitha angama-50 ukusuka emhlabathini, futhi zingunxande, zimise okwakholomu, zimise okwedome, ziyindilinga, zinamaqhuqhuva, noma zingajwayelekile ngokuphelele.
Kukhona izinsalela ezindala kakhulu eziphelele.
Ama-stromatolites ngokuvamile atholakala endaweni yasemanzini yolwandle noma emanzini amasha, futhi imvamisa akha emanzini angajulile. Ithiphu yasentshonalanga ye-Australia ingenye yezindawo ezidume kakhulu lapho ama-stromatolites "anamuhla" ekhona emachibini anosawoti aphezulu.
AmaStromatolites abalulekile futhi aqhubeka abalulekile empilweni emhlabeni. Njengoba i-cyanobacteria ayiqukethe ingenye yezinto ezindala kakhulu ezirekhodiwe, imisebenzi yayo ye-photosynthetic kukholakala ukuthi ibambe iqhaza ekwakhiweni komoya ocebile nge-oxygen lapho siphila khona njengamanje futhi ekugcineni kwaholela ekwakhiweni kwezinto eziphilayo ze-aerobic.
Ngaphezu kwalokho, njengoba sesishilo, lezi zakhiwo zisafaka umoya-mpilo omningi emkhathini wethu, ngakho-ke impilo yethu incike kuzo. Ngaphandle kwesakhiwo sayo esilula, ama-stromatolites athathwa njengabaluleke kakhulu emkhakheni we-biology, geology, kanye ne-astronomy, ikakhulukazi ngoba imininingwane ingatholakala ocwaningweni lwabo. Isibonelo, ku-geology, ama-stromatolites ahlinzeka ngemininingwane ebalulekile kuma-subdiscipline afana ne-stratigraphy, sedimentology, paleogeography, paleontology, ne-geophysics.
Kodwa-ke, ngokujwayelekile, ukubaluleka kwayo kulele misebenzi elandelayo:
Chaza izimo zokhokho zezinye izindawo, ikakhulukazi maqondana nenani likasawoti kanye nokufakwa kwamakhemikhali ahlukile.
Khomba izindawo lapho kwakukhona khona umsebenzi wezinto eziphilayo ngaphambilini.
Nquma ubudala beminye imvelo.
Dweba ugu lwangaphambilini.
Nciphisa isikhathi sokuvela kwezinto eziphilayo ze-photosynthetic (njenge-algae) nokwakhiwa kwemiphakathi yezinto eziphilayo.
Qonda izinga lokuqoqwa kwezidaka ezindaweni ezithile.
Funda ukuthi ama-microfossils abukeka kanjani.
Izindawo emhlabeni lapho singazithola khona
Njengoba sishilo ngaphambili, kunezindawo eziningi emhlabeni lapho singathola khona ama-stromatolites. Kodwa-ke, sizogqamisa ezinye izindawo ezihleliwe lapho sazi ukuthi singathola khona:
IPampa del Tamarugal National Reserve, eTarapacá, esifundazweni saseTamarugal, eChile.
ICuatrociénegas Basin, ehlane elimhlophe laseCoahuila naseLake Alchichica, eMexico.
I-Bacalar lagoon, eNhlonhlweni Yucatan, eningizimu yeMexico.
ILaguna Salada, esifundeni seRio Grande do Norte, eBrazil.
IChibi iSalda, eTurkey.
I-Exuma Cays, Isifunda sase-Exuma, Iziqhingi zaseBahamas.
IPavillion Lake, eBritish Columbia, eCanada.
IBlue Lake, eningizimu-mpumalanga ye-Australia.
Ama-stromatolites akuzona isakhiwo esivamile kuyo yonke imvelo yasemanzini emhlabeni wethu, kepha ngokuvamile zisatshalaliswa endaweni elinganiselwe lapho izimo zivumela ukubekwa kwamaminerali aziqambayo.
EMexico, kuyaziwa kuphela izingosi ezi-4 ezichaza ama-stromatolites "asanda kwenziwa":
ICuatrocienegas Basin: Itholakala eCuatrociénegas Valley Reserve eduzane noGwadule lwaseCoahuila esifundazweni saseCoahuila de Zaragoza engxenyeni esenyakatho yezwe.
IChibi i-Alchchica: Ichibi elinosawoti elinomthamo omkhulu we-magnesium esifundeni samahhala sasePuebla, eduze nenkaba yezwe.
ILaguna de Bacalar, eyaziwa nangokuthi yiLaguna de los Siete Colores de Bacalar: Itholakala eNhlonhlweni Yucatan, ingeyesifundazwe saseQuintana Roo.
IChichankanab Lagoon: futhi ingeyesifundazwe saseQuintana Roo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngama-stromatolites nezici zawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » Ama-stromatolites